TINCTURE OF TOON ON KHAMRIGA: LAGA BILAABO WAXA AY KA CAAWISAA, SIDA LOO QAATO DAAWEYNTA, WAXA AAD CABI KARTO, IYO SIDOO KALE HABKA DIYAARINTA, ISTICMAALKA GURIGA IYO CUNTADA SIDA - BEER CAGAARAN
Garlic waxaa loo aqoonsan yahay sifooyinka wanaagsan ee muddo dheer, laakiin weli waa caan ah oo la yaab leh leh waxtarkeeda. Waxaa jira cuntooyin badan oo ku salaysan, taasina waxay caddaynaysaa aragtida hadda jirta ee ku saabsan saameynta bogsashada ee khudraddan ku saabsan jirka bani'aadamka.
Xaaladdan, raashinka xiisaha, wax aan caadi ahayn oo ka kooban iyo ugu wax ku oolka ah, waxaa loo diyaarin karaa si madaxbannaan. Maanta waxaan u sheegi doonaa sida loo sameeyo daaweyn iyo sida loo dalbado. Waxa kale oo aad daawan kartaa fiidiyaha waxtar leh mawduucan.
Maxay daaweyntu ku caawineysaa?
Garlic ma aha oo kaliya "boqorka oo dhir udgoon" oo sharaxaad ka bixinaya falsafooyinka qadiimiga ah, laakiin sidoo kale dukaanka dabiiciga ah ee walxaha bayoloji firfircoon. Waxay u ogolaataa si buuxda u daaweyneysa jirka bini-aadanka iyada oo aan muuqan muuqaalka saameynaha.
Khubarada waxay kugula talinayaan in ay cunaan xumbo toon ah xilliga cuntada. Haddii aysan jirin wax suurtagal ah, markaas waxaad u baahan tahay inaad diyaariso tincture, gargaar iyo dhibaatooyin kuwaas oo la mid ah astaamaha khudradda cusub.
Wakhti dheer oo faleebo ah ayaa ku kordhinaysa kala-guurka dhammaan walxaha noolaha firfircoon ee dhexdhexaad ah. Isticmaalka tincture waxaa lagu muujiyey awoodda lagu nadiifinayo jiritaanka madax-xannibaadyo madax-bannaan oo soo uruuriyay sunta.
Inta lagu jiro habka wax soo saarka, natiijooyinka soo socda waa muuqaal:
Dib ugu soo noqo nidaamka guud ee jirka.
Xoojinta difaaca jirka.
Socodka dhiigga ee hagaagay.
Dib u soo celinta dabacsanaanta iyo suxulka darbiga derbiyada.
Nadiifinta mashiinka dheef-shiid kiimikaadka.
Nadiifinta maqaarka, ciddiyaha iyo timaha.
Dejinta hormoonka wajiga.
Tusaale ahaan qandhada tincture ee Tibetan, noo soo shub taaga fog, waa dhab ahaan dhallinyarada. Qalabkani waxa uu abuuray jinsi, wuxuu u muuqday daawo casri ah 50 sano kahor, waxaana weli loo isticmaalaa sidii qalab awood leh oo lagu bogsiinayo jirka oo idil.
Isla mar ahaantaana, had iyo jeer waxyeello ka timaadaa daawo kasta oo ku saabsan dareeraha aalkolada leh, sidoo kale wuxuu leeyahay tincture this. Tusaale ahaan, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo waxyaabaha ka horjoogsanaya dumarka uurka leh, carruurta, suuxdinta, cirrhosis joogto ah.
Sidoo kale waa lagama maarmaan in la isticmaalo qalabkan daryeel leh dadka qaba dhibaatooyinka dysbakteriosis. Ka dib dhan isbeddel ku yimaada microflora mindhicirka ayaa laga yaabaa in ay sii xumeeyaan xannuunka cudurka xitaa more.
Digniin: Ka hor intaan la isticmaalin tincture waxaa lagama maarmaan ah in lagala tashado takhtar haddii ay jirto xaalad caga-ba'an, nabaad-darro caloosha, dhibaatooyinka leh mareenka kaadida, iyo sidoo kale inta badan cadaadiska badalaadda.
Hababka diyaarinta alaabooyinka kala duwan ee alkahoosha leh
Wixii diyaarinta tincture toon, waxaad isticmaali kartaa cabitaano kala duwan oo khamriga ah, mana jirto wax isku mid ah oo ku saabsan taas oo ka wanaagsan: khamriga, vodka ama khamriga.
Haddii aad doorato inta u dhexeysa cabitaanka koowaad iyo tan labaad, markaa ma aha mid muhiim ah. Waxaad qaadan kartaa iyo dayaxa, qalcadda ugu yaraan 40 digrii. A Tincture alkol, dabcan, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho cabitaanka - 70˚, isla mar ahaantaana waxa fiican in la doorto marka loo eego GOST, fasalka raaxada.
Tincture garlic oo khamri guduudan ayaa lagula talinayaa dadka bukaanka leh wadnaha wadnaha iyo wareegga dhiigga. Xaqiiqdu waxay tahay in labadaba qaybo ka mid ah ay ka qaybqaataan oo keliya in aan caadi ahayn socodka dhiigga, laakiin mid kasta oo ka mid ah maaddooyinka ayaa ka saaraya sunta iyo waxyaabo waxyeellada jirka ka yimaada jirka.
Haddii aad si joogto ah u codsatid dhalinyarada Tibetan ee dhalinyarada, ka dibna wakhti yar ka dib, hawshii dhamaantagismka ayaa sii fiicnaan doonta.
Sidee loo adkeeyaa elixiirta dhalinyarada - cunto karis ah
Halbeegga tincture ee khamriga ah ayaa kuu ogolaanaya inaad adigu sameyso, maaddaama ay ka kooban tahay labo maaddo oo keliya:
Cabitaanka khamriga - 200 ml.
Sallaar - 300 gr.
Diyaargarowga loogu talagalay diyaarinta badeecada noocan oo kale ah waa isticmaalka sarreenka oo keliya oo dalagga ah. Sidaa darteed, waa in la diyaariyaa daawada this dayrta, marka khudradda ay leedahay ugu weyn ee nafaqooyinka.
Garlic waxaa lagu jajabiyey hoobiye alwaax ah, ama si la jarijiray mindi.
Cabbirka soo baxa waxaa la dhigayaa weel dhoobada ah ama dhalada oo ku shub khamriga.
Waxaad u baahan tahay inaad ku adkaysato ugu yaraan laba toddobaad, taas oo lagaa dhigayo meel gudcur ah oo lagu hayo heerkul aan ka badnayn + 18˚.
Inta lagu jiro muddadan, waxyaabaha ku jira weelka waa in la ruxaa si joogto ah.
Ka dib markii faleebo, daroogada ayaa lagu sifeeyaa iyada oo loo maro cheesecloth leh suufka.
Ku kaydi sidan dhallinyaro ah ee reer Tibetan ah qaboojiyaha + 4˚.
Sida loo qaato?
Sidee loo cabbaa tincture la kariyey, ka fiican ee cabitaanka? Iyada oo isticmaalka toonta loo diyaariyo noocyada kala duwan ee daroogooyinka ee loo isticmaalo guriga iyaga keligood. Tincture garlic waa u baahan yahay in la qaato caanaha (hal mar laba qaado oo ku filan) 15 daqiiqo cuntada ka hor. Caanaha waxay ka ilaalisaa xasaasiyadda caloosha ee ka yimaada isku dhafka qamriga-aaladda qamriga ah waxayna yareysaa urta gaarka ah ee qaadashada daawadan.
Waxaa lagula talinayaa inaad qaadato qiyaasta soo socota:
Maalinta koowaad: subaxdii - 1 dhibic, galabtii - 2, fiidkii - 3 dhibcood ka hor cuntada.
Maalinta labaad waxay la mid tahay 4, 5, iyo 6 dhibcood.
Maalinta saddexaad - subaxdii waxaan qaadanaa 7 dhibcood, si tartiib tartiib ah u kordhineysa qiyaasta hal dhibcane oo keena 15 dhibcood fiidkii maalinta shanaad.
Maalinta lixaad ilaa maalinta tobnaad, lakin, waxaad u baahan tahay inaad hoos u dhigto qiyaasta habkaas oo ah maalinta ugu dambaysa si aad hal dhibic u keento.
Laga bilaabo maalinta kow iyo toban ilaa iyo dhamaadka daawada, waxaad u baahan tahay inaad qaadato 25 dhibcood saddexdii jeer maalintii.
Guddi: Waxaa lagu talinayaa in lagu celiyo koorsada daaweyntan iyada oo la raacayo amarrada suxufiyiinta Tibetan ee 5-7 sano.
Yaan cabbi karin?
Sida daroogo kasta, tincture toon ayaa ka horjeeda:
Ha u qaadan tincture ee haweenka uurka leh, hooyooyinka kalkaaliyaha ah, carruurta da'doodu ka yar tahay siddeed iyo sideed sano, darawallada.
Adiga laguma daaweyn karo elixiriska dhalinyarada ee bukaanka qaba suuxdinta iyo jirro maskaxeed.
Oo ma waxaad u isticmaali kartaa qalab this cudurada xanuunka caloosha iyo caloosha, cudurka beerka, cudurka ulcer peptic, caabuqa ee kaadi haysta beedka.
Waxa kale oo aad xiiseyn kartaa in aad wax ka barato tinctures kale oo bogsiinaya toon: iodine, biyaha. Boggayaga waxaad ka heli kartaa badeecooyin daaweyn oo ku salaysan subagga toonta, iyadoo lagu daro malab, liin iyo gawaarida khudradda caleen, iyada oo qaboojiyaha iyo malab, caano, sinjibiin, liin iyo walxo kale, iyo sidoo kale isku dhafka boqol boqol maladiyada malab.
Sidaa darteed, daawada Tibetan ee dhalinyarada waa hab fiican oo looga hortago atherosclerosis, si loo xoojiyo nidaamka difaaca, iyo in laga ilaaliyo caabuqyada. Isla markaa, ka hor intaadan qaadin daawadan, waxaad u baahan tahay inaad la tashato takhtarkaaga wixii ku saabsan badbaadada daaweynahan.